Telonohorefy hafa kely | Hevitra MPANOHARIANA
Telonohorefy hafa kely
2008-12-03 @ 09:49 in Andavanandro
Teo amin'ny tontolon'ny Ntaolo dia tangoron-kitana roa ihany no fantatro fa nomeny anarana Ikotokelimiadilaona sy Telonohorefy. Mazava loatra fa mety ho diso amin'izay fomba fijeriko izay aho. Ikotokelimiadilaona io dia tsy fantatro hoe firafitra manao ahoana no amantarana azy fa Telonohorefy kosa dia haiko tsara amin'ny filaharany telo mitandahatra ary kintana iray fahaefatra kosa no somary mifampijadona amin'ny telo voalohany eo atsimo maka ilany andrefana eo ka izay lafy tsy misy ity kintana fahaefatra ity izany no manondro ny avaratra amin'ny alina. Tsy nanary ahy mihitsy izay zavatra fantatro izay fony izaho nilasy ka mamantatra ny avaratra amin'ny alina. Ny alin'ny alatsinainy 1 novambra teo ary teto Antananarivo dia nahita zavatra hafakely teny amin'ny lanitra aho. Tsy dia fahita loatra satria nilahatra toy ny kintana telonohorefy ny kintana roa (planeta tarihin'ny masoandro ireo mazava loatra satria mazava be koa) ary eo afovoan'izy roa ny volana. Tena milahatra tsara mihitsy izy ireo. Nirava tamin'ny valo ora alina aho no nilazan'ny mpiara-mody amiko ny hitany ary dia sondriana koa ny anao lahy. Impiry hahita izao moa?
Mazava loatra fa fanararaotra ny mba maka sary azy saingy tsy arifomba ny fakantsary ary tsy kalaza loatra koa ny mpaka sary. Izay takany no atolony ka zarainy aminareo. Tokony ho intelo mihoatra noho izao no ijeren'ny maso azy tamin'ny habeny teny an-danitra. Mampahatsiahy sahady ny fanatonan'ny Noely. Tsy dia hoe milaza inona akory io satria mbamifanandrify tahaka izay ny fihazakazahan'ny natiora eny an-danitra fa mahafinaritra ny mitazana azy e! indroa nipika sary aho fa nahavariana ilay voalohany (nisy flash) no nety kokoa fa ilay faharoa tsy nisy flash kosa nanalavalava ny boribory. Tsy hita nanjavonana ilay telonohorefy hafa kely (na ny volana na ireo kintana tsy hita izay nalehany) raha mbola saiky haka sary aho tamin'ny sivy ora sy sasany alina io alatsinainy io. Nandalo ihany saingy moa tsy ny fotoana fohy nefa tsara toa ireny no tena mahamamy ny fiainana raha tsy variana miondrika amin'ny tany ao? sa mety hahita vola latsaka amin'nyalina ao ianao? Soa ihany fa tia mitondra ny fakantsariko aho mba manao izay vitany izy e!
Mba nanandrana naka sary an'io ko aho fa tsy nahazo.
Misaotra nizara e !
Nampidirin'i pkm @ 12:03, 2008-12-03 [Valio]
ary tena betsaka mihitsy ny saika haka sary fa saiky tsy mety avokoa. Ny ahy io izao fanapahana tsy misy tahaka izany vao nanome endrika tahaka izao.
Nampidirin'i jentilisa @ 12:24, 2008-12-03 [Valio]
ary aiza ilay zavatra mangamanga mifindrafindra toa tsy eo @ ilay sary
Nampidirin'i news2dago @ 14:52, 2008-12-03 [Valio]
Inona indray ary izany zavatra mangamanga mifindrafindran'i N2D izany?
Nampidirin'i jentilisa @ 15:28, 2008-12-03 [Valio]
zavatra mangamanga : OVNI (UFO) sa mba nisotrosotro fotsiny ?
Nampidirin'i Rajiosy @ 21:11, 2008-12-04 [Valio]
sao dia mba misy messia teraka letsy tany :P
Nampidirin'i simp @ 23:17, 2008-12-04 [Valio]
Ny ankamaroan'ny olona kosa dia nahita io. Ary dia resabe ho an'izay nahita azy satria tsy fahita firy. ny resaka UFO indray moa tsyhitako izay avaly azy
Nampidirin'i jentilisa @ 06:49, 2008-12-05 [Valio]
Tena tsy nahatsikaritra io aho fa ny télé no nahitako azy. Ary teo aho vao nijery hoe ahoana tokoa moa izany fa tena efa lasa nifanalavitra ilay volana ireo kintana izao !!!! Mahagaga an !
Nampidirin'i kdaombaramita @ 19:11, 2008-12-05 [Valio]
ka miova araka ny androio satria samy mihodikodina eny koa! na ny marina kokoa ny volana no tsy haka ilay toerana fovoany raha tsy fotoana elaela indray koa!
Nampidirin'i jentilisa @ 20:12, 2008-12-05 [Valio]
Mampahatsiaro ny maha-skoto tokoa izy izany ry jentilisa a!
Efa hitanisa kintana ihany : mba fijeriko koa ny "croix du sud" izay ampiasaina sy ny fitarikandro.
Tadidin'ise koa ve ilay fikarohana ny avaratra amin'ny alalan'ny rivotra, ny ala, ny lomotra ? hihihihi
Nampidirin'i Tokinao @ 10:29, 2008-12-14 [Valio]